Semalt: Siyaabaha loo Falanqeeyo Waxqabadkaaga SEO
2. Maxaa ugu falanqeynaya waxqabadkaaga SEO marka hore?
3. Falanqaynta waxqabadkaaga SEO
6. Maamulayaasha shabakada Google
7. Xawaaraha bogga
Ma waxaad dooneysaa inaad qiimeyn sare uga sameyso Google TOP? Ma dooneysaa inaad wadooyin badan u kaxeyso websaydhkaaga? Ma dooneysaa inaad kordhiso guud ahaan guusha ganacsigaaga? Falanqaynta SEO ayaa noqon kara waxa aad ubaahantahay. Macluumaadka la soo ururiyey ayaa kaa caawin kara samaynta go'aannada istiraatiijiyadeed si loo wanaajiyo qiimeynta websaydhka ee matoorada raadinta, wadida gaadiid badan goobtaada iyo waxyaabo intaa ka sii badan.
Semalt wuxuu leeyahay aalad xoogan oo falanqeyn ku sameysa la socodka suuqa; goobjoog ka ahaanshaha mareegtadaada iyo kan tartamayaashaada; sidoo kale waxay kuu keenayaan warbixin guud oo ku saabsan falanqaynta ganacsiga.
Maxaa ugu falanqeynaya waxqabadkaaga SEO marka hore?
1. Si aad ula socoto jagooyinka websaydhkaaga: Semalt, waxaa laguu oggol yahay inaad abuurto sawir buuxa oo ku saabsan sida arrimuhu u xirayaan meheraddaada suuqa internetka. Macluumaadka la helo, waxaad awood u yeelan doontaa inaad muujiso qodobbada muhiimka ah ee shaqadaada mustaqbalka.
2. Si aad u hesho suuqyo cusub: Waxaad ogaan doontaa fursado cusub oo loogu talagalay qaybinta alaabadaada iyo adeegyadaaga iyo horumarkaaga guud ee sumadaha ee dalal gaar ah oo kicin doona istiraatiijiyadaha ganacsi ee gobolka la xiriira ee ganacsigaaga.
3. Si aad isha ugu hayso meelaha tartamaya: Semalt wuxuu sidoo kale daaha ka qaadaa dhammaan macluumaadka la xiriira xaaladda suuqa tartamayaashaaga. Aqoontaani waxay kaa caawin doontaa inaad horumariso istiraatiijiyooyin wax ku ool ah oo aad had iyo jeer kaga hor xirnaatid xirmada maxaa yeelay waxaad ogaan doontaa waxyaabaha ay si sax ah u sameynayaan oo aad ugu soo dari karto taxanaha xeeladaha wax ku oolka ah.
4. Si aad u soo bandhigto falanqayntaada: Semalt wuxuu ku siinayaa fursada qaaska ah inaad ku sameyso warbixinno calaamad cad oo ku saabsan falanqayntaada kaas oo aad si fudud uga soo dejisan karto PDF ama qaabab EXCEL isla markiiba ka soo baxa boggooda. Tani waa mid aad muhiim u ah markaad u baahatid inaad u soo bandhigto macaamiishaada ama kooxdaada.
Falanqaynta waxqabadkaaga SEO
Ka dib marka aad gasho shaashaddaada, waxaad guji kartaa barta menu dhinaca bidix halka aad ku arki doonto liistada xulashooyinka falanqaynta SEO.
Marka ugu sarreysa, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku darto bogga aad rabto inaad falanqeyso. Hoos waxaad kahelaysaa, waxaad haysataa batoonada aad adigu markasta riixdo markasta oo aad dareento inaad tagayso meesha aad kujirto.
Kadibna midigta hoosta dashboard-ka, waa aaladaha ugu waaweyn ee falanqaynta Semalt oo loo qaybiyay 4 qaybood - SERP, Content, Google Webmasters iyo Speed Speed.
Aynu aragno sida mid kasta oo ka mid ah aaladahaani u shaqeeyaan. Waxaa muhiim ah in halkan laga ogaado in aad had iyo jeer soo dejisan karto warbixin meelkasta oo aad aragtid batoonka 'Hel Report'.
SERP waxay leedahay 3 hoosaad oo hoosta ku yaal:
a. Eray-bixinnada ku jira TOP: Warbixinta halkan laga helay waxay muujineysaa dhammaan keywords-ka boggaagu u taagan yahay natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Google, bogagga darajaysan, iyo boosaskooda SERP eray fure gaar ah leh. Markaad gujiso 'Kalmadaha Furaha ee TOP', waxaa lagu geyn doonaa bog halkaas oo aad ka arki karto tirada ereyga furaha ah ee TOP, keywords qaybinta TOP iyo darajooyinka ereyada muhiimka ah.
'Number of keywords' waa shax muujinaya tirada ereyada muhiimka ah ee Google TOP waqti ka dib. Tani waxay kaa caawineysaa inaad hubiso isbedelada lambarrada ereyada muhiimka ah ee boggaaga intarnetka ee ah TOP 1-100 natiijooyinka raadinta dabiiciga ah.
Iyada oo la adeegsanayo 'Keywords qaybinta TOP', waxaad ka heli kartaa tirada saxda ah ee ereyga furaha ee shabakadaada ee Google TOP 1-100 natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee loo dejiyay taariikh hore.
Jaangooyooyin kujira keywords 'waa miis ku tusaya ereyaga ugu caansan ereygaaga boggaga internetka ee kujira natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Google TOP. Jadwalku wuxuu sidoo kale ku tusi doonaa jagooyinkooda SERP ee taariikhaha la xushay iyo isbedelada dhacay ee ka hor imanaya taariikhdii hore. Markaad gujiso batoonka 'maaree kooxaha', waxaad abuuri kartaa koox cusub oo ah keywords, maareyn kartid kuwa jira ama waxaad dooran kartaa inaad ka dooratid ereyga furaha miiska 'Qiimaynta Keywords' ee hoose waxaadna ku dari kartaa kooxdaada ereyada furaha. Tani waa muhiim in aad u adeegsan karto si aad ula socoto horumarka boggaaga maadada, URL, iwm.
Semalt wuxuu sidoo kale ku siinayaa fursad aad ku shaandhayso xogta jadwalka iyada oo la adeegsanayo cabbirro kala duwan - erey-bixin ama qaybteeda, URL ama qaybteeda, Google TOP 1-100 iyo isbeddelada booska.
b. Bogagga ugu Fiican: Markaad gujiso 'Bogagga ugu Fiican', waxaa lagu tusi doonaa bogagga ku yaal bartaada kuwaasoo keena tirada ugu badan ee taraafikada dabiiciga ah. Waa inaad si taxaddar leh u baartaa, adigoo raadsanaya boggaga khaladaadka SEO, hagaajinta khaladaadkan, ku darista waxyaabo gaar ah oo dheeri ah iyo sidoo kale inaad ku dhiirrigeliso bogaggan jiilka taraafikada ee Google ka badan.
'Bogagga ugufiican waqtiga' waa shax muujinaya isbeddelada tirada bogagga shabakaddaada ee TOP tan iyo markii la bilaabay mashruucaaga. Waad arki kartaa xogta usbuuc kasta ama bil kasta markii aad beddeleyso qiyaasta.
Hoosta 'bogagga ugu fiican waqti ka dib', waxaad haysataa aaladda 'Kala duwanaanta' oo kaa caawinaysa inaad hesho tirada websaydhada Google TOP 1-100 natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee loo dejiyay taariikh hore. Waad beddeli kartaa qiyaasta si aad u hubiso farqiga usbuuc kasta ama bishii. Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad ku aragto farqiga tiro ahaan ama qaab jaantus ah.
Waxa kale oo jira jaantus loo yaqaan 'Boggag la soo xulay keywords stats' kaasoo muujinaya isbeddelada tirada keywords ee bogaggii la xulay ayaa ku jiray Google TOP laga soo bilaabo mashruucan.
Ugu dambeyntii, waxaan haynaa 'Bogagga TOP', kaasoo shax muujinaya tirada ereyada muhiimka ah ee bog gaar ah loogu meeleeyay Google TOP taariikhaha la xushay. Waxaad sidoo kale ku shaandhayn kartaa liiska bogagga ugu fiican URL ama qaybtiisa sidoo kale waxaad dooran kartaa inaad xulato bogagga shabakaddaada ku jira darajada TOP 1-100.
c. Tartamayaasha: Tani waa halka aad ka heli doontid dhammaan bogagga internetka ee ku jira TOP 100 oo ah ereyaal fure la mid ah oo websaydhku ku fadhiyo. Waxa kale oo aad arki doontaa meesha aad ka dhex taagan tahay dadka aad xafiiltamaan tirada guud ee ereyada muhiimka ah ee TOP 1-100.
Boggan, waxaad ka heli doontaa qaybo baloogyo ah oo loo yaqaan 'Wadaag Keywords' oo soo bandhigaya tirada ereyada muhiimka ah ee la wadaago ee bartaada iyo TOP 500 oo aad xafiiltamaan darajada Google SERP.
Marka ku xigta, waxaad kahelaysaa 'Wadaagidda ereyada' Keywords Dynamics 'kaasoo ah shax muujinaya isbeddelada lambarrada ereyada la wadaago ee kuwa kula tartamaya ee gaarka ah ee aad muujisay inay ka galeen TOP.
Hoos waxaad ku arki doontaa 'Tartanka Google TOP' kaasoo ah miis muujinaya tirada ereyada muhiimka ah ee la wadaago ee adiga iyo kuwa kula tartamaya 'darajada websaydhka ee TOP. Semalt wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka inaad ku barato farqiga u dhexeeya tirada ereyada muhiimka ah ee la wadaago ee laga soo horjeedo taariikh hore. Waxaad waliba shaandhayn kartaa liistada websaydhada aad la xafiiltameyso adoo adeegsanaya qayb buuxda ama qayb ka mid ah oo waxaad u liidan kartaa liistada bogagga keliya ee galay TOP 1-100.
Qeybta tusmada, waxaad ku arki doontaa aaladda 'Ucid la'aanta Hubinta' kaas oo marka aad gujiso kadib ay kugu geyn doonto boggeeda. Halkaan ayaad ka ogaan doontaa haddii Google u arko boggaaga mid gaar u ah iyo haddii kale. Waa inaad ogaataa in xitaa haddii aad laba jeer hubiso sida ay u tahay mid ahaanta mareegtadaada, waxa suurtogal ah inuu qof kale soo guuriyay. Haddiise qofkaas tusiyo waxa ku jira ka hor intaadan adigu ahayn, Google wuxuu u aqoonsan doonaa halka ay ka yihiin halka ugu hooseysa halka nuxurkaagu sumadaysan doono sumcad. Ma dooneysid inaad ku garaacdo rigoorada Google sababtoo ah Google ayaa ku ciqaabaya haddii aad haysato tiro badan oo ah waxyaabaha la khafiifiyey ee shabakadaada.
Semalt wuxuu ku siinayaa dhibco boqolkiiba boqol oo u gaar ah si uu kuugu wargaliyo sida nuxurka websaydhku uu u sameynayo indhaha Google. Dhibcaha 0-50% waxay kuu sheegaysaa in Google uu tixgeliyo waxyaabahaaga si khaas ah loo leeyahay isla markaana ma jirto fursad ah booska kobcinta shabakadda noocan oo kale ah. Semalt wuxuu kaa caawin karaa inaad ku beddesho waxyaabahaaga hadda jira mid gaar ah oo adiga ku siiso dhibco wanaagsan.
Marka loo eego 51-80%, Google waxay u aragtaa waxyaabahaaga inay tahay dib-u-qoris ugu habboon. Websaydhkaagu wuxuu fursad qafiif ah ku leeyahay koritaanka bogga. Laakiin maxaad dhexdhexaadin u noqoneysaa marka Semalt uu ku siin karo waxa ugu fiican?
81-100%, Google waxay u aragtaa boggaaga mid gaar ah oo booskaaga websaydhku wuxuu u badan yahay inuu ku xirnaado Google SERP.
Waxaad ka heli doontaa liistada dhammaan qoraalada qoraalka ah ee ay Googlebot ku aragto websaydhka khaaska ah ee su'aasha laga hadlayo (Semalt wuxuu kaloo kaa caawin doonaa inaad muujiso qaybaha nuqul ka mid ah nuxurka websaydhka).
Sidoo kale, waxaad ka heli doontaa jadwal loogu magac daray 'Source Source Source'. Liistani waa liisaska shabakadaha ee Google u tixgeliso ilaha aasaasiga ah ee nuxurka boggaaga. Halkan waxaad ku ogaan kartaa sida saxda ah ee qaybta boggaaga laga helo mid kasta oo ka mid ah websaydhyadaas.
Tani waa adeeg kuu muujinaya sida shabakadaada loogu soo bandhigo natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Google iyadoo la aqoonsanayo arrimaha tixraaca adiga. Arintan hoosta, waxaad ka heli doontaa dulmar guud, wax qabad iyo qaab-dhismeed.
a. Dulmarka guud: Qaybta guud, waxaad soo gudbin kartaa oo xaqiijin kartaa websaydhkaaga. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa URL-yadaada tusmada Google.
b. Waxqabadka: Xogta laga helo halkan waxay kuu sheegi doontaa sida ugu waxtarka badan ee websaydhkaagu u yahay. Waad is barbar dhigi kartaa xogta waqti cayiman / waqti cayiman. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato awooda websaydhkaaga iyo waliba khalad kasta oo saamaynaya darajadaada TOP.
c. Sitemaps: Halkan waa meesha aad ugu soo gudbin karto bogga internetka ee websaydhkaaga Google si aad u aragto khariidadaha shabakadda ee la tilmaamay iyo kuwa khaladaadka ku jira.
Hoosta 'Jaantusyada Soo-Gudbinta Goobta', waxaad ka arki kartaa tirada bogagga shabakadda ee aad u gudbisay console raadinta Google. Laga bilaabo halkan waxaad ka hubin kartaa xaaladdooda iyo sidoo kale tirada URLs ay ku jiraan.
Qalabka 'Bogaga Xawaaraha Xawaaraha' waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo bal in wakhtiga xaddiga boggaagu uu buuxinayo heerarka Google. Waxay kaloo tilmaami doontaa khaladaadka u baahan hagaajinta waxayna ku siin doontaa talo soo jeedin sax ah oo aad dalban karto si loo hagaajiyo wakhtiga culeyska ee boggaaga. Waxay la jaanqaadi doontaa waqtiga celceliska culeyska ee desktop-ka iyo baadi-goobada mobilada labadaba.
Mid ka mid ma dhaafi karo muhiimadda ay leedahay falanqaynta waxqabadkaaga SEO iyo qodobkaan, waxaad arki kartaa sida tan loo sameeyo habka ugu fiican - habka Semalt.